तपाइँको YouTube सामग्री अप्टिमाइज गर्न ह्यासट्यागको अधिकतम कसरी बनाउने - YTpals
धेरै व्यक्तिहरूले खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन प्रविधिहरू वेब पृष्ठहरूमा मात्र लागू गर्न सकिन्छ भनेर विचार गर्छन्। यद्यपि, त्यो सत्यबाट टाढा छ, जस्तै खोज इन्जिन अनुकूलन प्रविधिहरू कुनै पनि प्लेटफर्ममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। YouTube मा ह्यासट्यागहरूले खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन प्रयासहरू सुधार गर्नको लागि एक आवश्यक तत्वको रूपमा काम गर्दछ। प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दा, ह्यासट्यागहरूले तपाईंको भिडियो सामग्री खोज परिणामहरूमा उच्च स्थानमा रहेको सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
यो वर्ष युट्युबले नयाँ फिचर लन्च गरेको छ ह्यासट्याग खोज परिणाम पृष्ठ। यो सुविधा दर्शकहरूको लागि खोज परिणामहरूको सान्दर्भिकता सुधार गर्ने लक्ष्य राख्छ। प्रयोगकर्ताहरूले पहिले ह्यासट्यागहरू प्रयोग गरेर प्लेटफर्ममा भिडियोहरू खोज्न सक्ने भए पनि, नयाँ सुविधाले थप विशिष्ट परिणामहरू दिन्छ। YouTube एल्गोरिथ्मले नयाँ ह्यासट्याग खोज परिणाम पृष्ठद्वारा प्रस्तावित खोज परिणामहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्दैन। यस अपडेट मार्फत, थप च्यानलहरूले ह्यासट्यागहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेमा प्लेटफर्ममा पत्ता लगाउने अवसर पाउनेछन्। त्यसोभए तपाइँ तपाइँको सामग्री अनुकूलन गर्न ह्यासट्यागहरू कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? हामी भित्र डुब्न दिनुहोस्।
युट्युबमा ह्यासट्यागलाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ –
विशिष्ट ह्यासट्यागहरू: यसमा भिडियोको केन्द्रीय विषयवस्तुलाई जनाउने एक-शब्द ह्यासट्यागहरू हुन्छन्।
वर्णनात्मक वा कम्पाउन्ड ह्यासट्यागहरू: यसमा लामो-पुच्छर किवर्डहरू जस्तै बहु-शब्द ह्यासट्यागहरू हुन्छन्। तपाईको भिडियोको लागि कम्पाउन्ड ट्यागहरू प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका खोज पट्टीबाट सुझाव गरिएका परिणामहरू प्रयोग गरेर हो।
जेनेरिक ह्यासट्यागहरू: यसमा भिडियोको विषयवस्तु वर्णन गर्ने वाक्यांश वा शब्दहरू हुन्छन्।
गलत हिज्जे: अक्सर, दर्शकहरूले भिडियोहरू खोज्दा शब्दहरू गलत हिज्जे गर्न सक्छन्। तपाईंले नयाँ ह्यासट्यागहरू सिर्जना गर्न हिज्जे त्रुटिहरू पनि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्लेटफर्ममा पत्ता लगाउने सम्भावना बढाउँछ।
तपाईंको भिडियोहरूमा ह्यासट्यागहरू कसरी समावेश गर्ने?
ह्यासट्यागहरू अनिवार्य रूपमा वर्णनात्मक कुञ्जी शब्दहरू हुन् जुन YouTube खोज परिणामहरूमा तपाईंको सामग्रीको दृश्यता बढाउन YouTube मा तपाईंको भिडियोहरूमा थप्न सकिन्छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको भिडियोहरू अझ सजिलै फेला पार्न अनुमति दिन्छ। प्लेटफर्ममा तपाईंको पहुँच फराकिलो बनाउन यी ह्यासट्यागहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ। YouTube एल्गोरिथ्मले तपाइँका भिडियोहरूलाई सान्दर्भिक वर्गीकरण र श्रेणी दिनको लागि ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्दछ। ह्यासट्यागहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नु नयाँ ह्यासट्याग खोज परिणाम पृष्ठको साथ थप महत्वपूर्ण भएको छ।
युट्युबमा ह्यासट्यागहरू थपिने तीन फरक तरिकाहरू छन् -
शीर्षक माथि: भिडियो विवरणमा प्रविष्ट गरिएका पहिलो तीन ह्यासट्यागहरू यहाँ प्रदर्शित छन्
शीर्षकमा: यो शीर्षक माथि ह्यासट्यागहरू प्रदर्शन गर्नुको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
YouTube को मोबाइल एपले तपाईंलाई भिडियो शीर्षक माथि देखाइएको भिडियोहरूमा स्थान ट्यागहरू थप्न अनुमति दिन्छ। यी स्थान ट्यागहरूमा सामान्यतया ह्यास (#) चिन्ह हुँदैन।
यद्यपि कुनै पनि भिडियोमा थप्न सकिने ह्यासट्यागहरूको संख्यामा कुनै सीमा छैन, त्यहाँ क्यारेक्टरहरूमा प्रतिबन्धहरू छन्। प्रत्येक ट्यागको लागि अधिकतम ३० क्यारेक्टरहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। भिडियो विवरणको पाठ क्षेत्रले विभाजकहरू सहित लगभग 30 वर्णहरू स्वीकार गर्दछ।
तपाईंको भिडियोहरूमा ह्यासट्यागहरू समावेश गर्नका लागि मूल्यवान सुझावहरू
१. व्यवस्थालाई विचार गर्नुहोस्: तपाईंको सामग्रीलाई अनुकूलन गर्न ह्यासट्यागहरू थप्दा, मूल ह्यासट्यागहरू सुरुमा राख्नु आवश्यक छ। यसले YouTube एल्गोरिदमलाई तपाइँको भिडियोलाई थप सजिलैसँग पत्ता लगाउन र वर्गीकरण गर्न अनुमति दिन्छ।
२. धेरै ह्यासट्यागहरू थप्दै: तपाईंले भिडियोमा धेरै ह्यासट्यागहरू थप्नबाट टाढा रहनु पर्छ। जसरी यो हुन्छ, यसले दर्शकहरूको लागि तपाइँको भिडियोहरूको दृश्यता बढाउन मद्दत गर्दछ।
3. पूर्वनिर्धारित ट्यागहरू सिर्जना गर्नुहोस्: तपाईं आफ्नो सबै भिडियोहरूमा थपिएको पूर्वनिर्धारित ट्यागहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्वनिर्धारित ट्यागहरूले खोज परिणामहरूमा तपाईंको सामग्रीको दृश्यता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।
4. किवर्ड प्लानर प्रयोग गर्नुहोस्: धेरै कीवर्ड प्लानर उपकरणहरूले तपाईंलाई ट्रेन्डिङ ह्यासट्यागहरू खोज्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईं प्रभावकारी ह्यासट्यागहरूको राम्रो सूची प्राप्त गर्न यी उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
YouTube मा थप हेराइहरू प्राप्त गर्न र तपाईंको YouTube च्यानलको वृद्धि सुनिश्चित गर्न, ह्यासट्यागहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ। माथि उल्लेखित सुझावहरू प्रयोग गरेर, तपाईंले खोज परिणामहरूमा उच्च श्रेणीमा हुने सम्भावनाहरू बढाउनुहुनेछ। तपाईं YTpals द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रिमियम YouTube सेवाहरू प्रयोग गरेर आफ्नो च्यानलको वृद्धिमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। यी सेवाहरूले तपाईंलाई प्रदान गर्न सक्छन् निःशुल्क YouTube हेराईहरू, मनपर्ने, र सदस्यहरू, जुन नयाँ च्यानलको वृद्धि किकस्टार्ट गर्नको लागि उत्कृष्ट हुन सक्छ।
YTpals सबै YouTube सेवाहरूसँग 100% सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ, त्यसैले ग्राहकहरूले आफ्नो गोपनीयताको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। हाम्रो 24/7 ग्राहक सेवा तपाईलाई हुन सक्ने कुनै पनि प्रश्नहरूको जवाफ दिन यहाँ छ। हाम्रो कुनै पनि प्रिमियम YouTube सेवाहरू प्राप्त गर्न, हामीलाई आज सम्पर्क गर्नुहोस्!
तपाइँको YouTube सामग्री अप्टिमाइज गर्न ह्यासट्यागहरूको अधिकतम कसरी बनाउने YTpals लेखकहरू द्वारा, 14 जनवरी 2022
सर्वश्रेष्ठ शपपेबल यूट्यूब भिडियोहरू कसरी सिर्जना गर्ने?
यूट्यूब आजको युगमा एक ठूलो घटना हो जहाँ डिजिटल र सामाजिक मिडिया मार्केटिंग एकदम धेरै ब्रान्ड मार्केटिंग क्षेत्र चलाउँदैछ। गुगलको स्वामित्वमा रहेको भिडियो प्लेटफर्मसँग विश्वभर मा २ अरब भन्दा बढी सक्रिय मासिक प्रयोगकर्ताहरू छन् - जुन केहि…
यहाँ तपाईंलाई YouTube मा सुझाव भिडियोको बारेमा जान्नु आवश्यक छ
जब हामी संगीत भिडियो वा ट्यूटोरियल स्ट्रिमि .को बारेमा सोच्दछौं, YouTube निस्सन्देह दिमागमा आएको पहिलो चीज हो। किन यो हुनु हुँदैन? जे भए पनि, भिडियो स्ट्रिमिले यसको पछि उल्लेखनीय कार्यहरू गर्यो।
कसरी YouTube प्रभावकर्ताहरूले ब्रान्डहरूलाई उनीहरूको आरओआई अनुकूलित गर्न मद्दत गर्दछ?
आज ब्रान्ड मार्केटिको अर्थ केवल परम्परागत विपणनको मार्केटिंग भन्दा धेरै बढी भएको छ। सामाजिक मिडिया मार्केटिंग आज ब्यापारहरूको लागि खेल परिवर्तनकर्ता बन्न गएको छ, तिनीहरूलाई व्यापक श्रोताहरूको पहुँच प्रदान गर्दै ...